Fampahalalana momba an'i Apple. Ny tontolo manodidina ny Mac
Gazety 3, 10 Aogositra novokarin'ny Geofumed
Gazety telo farafahakeliny amin'ity volana ity no nahita lahatsoratra mahaliana ho an'ny tontolo iainana ara-jeografia, ary ny sasany amin'ireo geeky manias antsika, etsy ambany dia manome lohahevitra 10 ho an'ny fotoam-pianaranao mahasalama. Geoinformatics Ny tiako indrindra ao anaty diary maro dia maro, miaraka amin'ny fahalianana amin'ireto lohahevitra manaraka ireto: ISIP, ny Rafitry ny ...
Apple - Mac, jeospatial - GIS, GPS / Fitaovana, qgis
GIS Kit, farany, zavatra tsara ho an'ny iPad
Farany hitako ny fampiharana tena manintona ho an'ny iPad izay mitodika amin'ny fakana ny angon-drakitra GIS eny an-tsaha. Ny fitaovana dia mety manana zavatra marobe, ary mamela ireo fampiharana izay efa nanandramako toy ny GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ho an'ny iPad sy GISRoam amin'ny diapers; ity farany mahery nefa tsy dia tia miasa loatra ary mifantoka bebe kokoa amin'ny famakafakana ...
Torohevitra mba ho zatra amin'ny sehatra virtoaly amin'ny iPad
Tsy misy tsara noho ny keyboard Zagg hiasa amin'ny iPad, izay efa naseho ahy fa mpitroka hatairana ho an'ny rano mitete iray metatra amin'ny beton. Saingy tsy fahasoavana foana ny fandehanana an'io, ka ity misy toro-hevitra vitsivitsy hahafantaranao ny fitendry virtoaly. 1. Tsy tsara ny maka fahazaran-dratsy.…
Gazety 3, lohahevitra 3
Gazety PC, fanontana nomerika tamin'ny Jolay 2011, vao tonga androany. Manararaotra izany aho mba hampiroboroboana lohahevitra iray izay nampiala ahy teto amin'ity fivoarana saika tsy azo ivalozana ity amin'ny fiverenana hanao saika ny zava-drehetra amin'ny hoho. Mampiroborobo ihany koa aho amin'ny tendrony farany mahaliana amin'ny gazety roa hafa ao amin'ny tontolo geospatial izay misy ...
Apple - Mac, jeospatial - GIS, Microstation-Bentley
Ahoana ny fakana ny efijery Ipad
Miaina amin'ny fotoan'ny sakafo haingana isika, eo an-dàlana daholo ny zava-drehetra, maodely, azo refesina ary misy ifandraisany. Be dia be ka mianatra zavatra amin'ny sidina isika. Rehefa afaka efa ho enim-bolana ny fampiasana ny iPad, tonga tao amiko ny fomba ahafahako manao izay atao amin'ny birao antsoinay hoe "efijery pirinty" na adika ...
Apple - Mac, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Ahoana no handefasana rakitra avy amin'ny Ipad ho an'ny PC?
Ny fiasana amin'ny takelaka dia fanazaran-tena tsy maintsy zatra, satria fironana tsy azo ovaina io. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ny fomba famahana ny olan'ny fandefasana data eo anelanelan'ny PC sy ny Ipad miaraka amina safidy telo farafaharatsiny. 1. Amin'ny alàlan'ny Itunes Ity angamba no fomba mahomby indrindra, satria ...
Blogsy, ho an'ny blôgy avy amin'ny iPad
Toa nahita rindrambaiko iPad azo ekena ihany aho tamin'ny farany izay mamela bilaogy tsy misy fanaintainana be. Hatreto aho dia nanandrana ny BlogPress sy ilay WordPress ofisialy, saingy mieritreritra aho fa i Blogsy no voafantina raha toa ka misy fanovana WYSIWYG milamina kokoa na tsia. Na dia tsy maintsy mamaha ny serivisy amin'ny sary nampiantranoina ...
Apple - Mac, Internet sy Blogs, Tsangatsangana
Nosintomiko ny rindranasa iray ho an'ny iPad izay mamela ahy afa-po mihoatra noho ny fahafaham-po, amin'ny filàna tsy maintsy nataoko tamin'ny GPS ary nitazako sary an-tserasera izany na tamin'ny Google Earth. Ity no Gaia GPS, fampiharana izay mitentina 12 $ eo ho eo fotsiny nefa tena miasa ...
Apple - Mac, GPS / Fitaovana
Magazine PC, mifindra amin'ny kinova nomerika
Efa nisotro ronono nandritra ny fotoana ela ny kinova anglisy amin'ity magazina ity, ary na dia nanambara izany aza ny kinova Hispanika dia nanohy naneho kopia hatrany ireo varavarankelin'ny fivarotana lehibe. Ary farany, rehefa avy nangataka roa volana aho dia nanaiky fa najanon'i Televisa tamin'ny farany ny famokarana ary manana fahatsapana aho fa ...
Omaly dia andro nahaliana tokoa ho an'ireo mpankafy ny haitao Apple, indrindra ireo mpampiasa takelaka Ipad matetika sy mety ho izy. Na dia manontany momba ny fitsikerana ny iPad 2 aza ireo teny lakile izay mameno ny motera fikarohana ankehitriny momba io lohahevitra io, raha mora ny mividy iray izao, raha azo havaozina ny Ipad 1 ...
Apple - Mac, ArcGIS-ESRI, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Microstation-Bentley
Miandry ny iPad 2
Mampihomehy, fa ny ampahany betsaka amin'ireo mpampiasa sehatra finday dia miandry izay haseho afaka ora vitsivitsy. Miaraka amin'ny toerana misy an'i Apple amin'ny finday, ilaina ny mahita ny zava-mitranga: Hahafantatra ny fomba hanolorana ilay kilalao miaraka amin'ny fiantraikan'ny Jobs tamin'ny taon-dasa ve i Tom Cook? Hiverina amin'ny ...
Andro vitsy lasa izay, Google dia nanitatra ny fanohanany rakitra ho an'ny Google Docs. Talohan'izay dia tsy dia hitanao loatra ireo rakitra Office toy ny Word, Excel, ary PowerPoint. Na dia famakiana fotsiny aza io, Google dia mampiseho ny fikirizany hanome ny fahaizan'ny rafitra miasa lehibe kokoa avy amin'ny rahona. Antenaina fa ireo fiasa ireo koa ...
Apple - Mac, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Internet sy Blogs